Online Marg | अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमलाले रचिन् इतिहास, के गरिन् त्यस्तो ?
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमलाले रचिन् इतिहास, के गरिन् त्यस्तो ?
काठमाडौं । कमला ह्यारिस अमेरिकाको कार्यबाहक राष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला भएकी छन् । जो बाइडेनले शुक्रबार आफ्नो राष्ट्रपतीय अधिकारी केही समयका लागि सुम्पेपछि ह्यारिस अमेरिकाको कार्यबाहक राष्ट्रपति बनेकी हुन् ।
नियमित कोलोनोस्कोपीका क्रममा अस्पताल भर्ना भएका बाइडेनले छोटो समयका लागि अर्थात् आफू एनेस्थेसियाको प्रभावमा भइन्जेलसम्मका लागि ह्यारिसलाई आफ्नो अधिकारी सुम्पेका थिए । शनिबार ७९ औं जन्मदिन मनाउनुपूर्व नै बाइडेनले कोलोनोस्कोपी गर्न शुक्रबार बिहानै वाल्टर रीड मेडिकल सेन्टर पुगेका थिए ।
बाइडेनको कोलोनोस्कोपीका क्रममा ह्यारिसले ह्वाइट हाउसको वेस्ट विङस्थित आफ्नो कार्यालयबाट कार्यबाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । यस क्रममा छोटो समयका लागि अमेरिकी सेना र आणविक हतियार उनको नियन्त्रणमा आएको थियो ।
सन्ताउन्न वर्षीय ह्यारिस अमेरिकाकी पहिलो निर्वाचित महिला उपराष्ट्रपति हुन् । यति मात्रै होइन, उनी पहिलो अश्वेत र दक्षिण एसियाली मूलकी पहिलो राष्ट्रपति समेत हुन् । अमेरिकामा एनेस्थेसिया दिएर गरिने उपचारका क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअघि जर्ज डब्लू बुसले कोलोनोस्कोपीका क्रममा डिक चेनीलाई २००२ र २००७ मा राष्ट्रपतीय अधिकारी सुम्पेका थिए ।
तर सन् २०१९ मा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने उप–राष्ट्रपति माइक पेन्सलाई राष्ट्रपतीय अधिकारी सुम्पन नपरोस् भनेर वाल्डर रीडमा सुटुक्क कोलोनोस्कोपी गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
बल्ल बाहिरियो उत्तर कोरियाले ब्याक टु ब्याक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नुको रहस्य !
आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अफगानिस्तानमा भूकम्प, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट